As of Sun, 09 Aug, 2020 14:10
ACLBSL 688.00 ( 6549 ) ( -31 ) ADBL 408.00 ( 20823 ) (2) AHPC 94.00 ( 15517 ) (0) AIL 467.00 ( 195082 ) ( 42 ) AKJCL 53.00 ( 1080 ) (0) AKPL 112.00 ( 24848 ) ( -1 ) ALBSL 676.00 ( 989 ) ( -9 ) ALICL 613.00 ( 16725 ) (0) API 106.00 ( 6761 ) ( -2 ) BARUN 83.00 ( 156 ) ( -2 ) BFC 98.00 ( 11199 ) ( -1 ) BOKL 222.00 ( 12843 ) (0) BPCL 350.00 ( 4080 ) (0) CBBL 1,040.00 ( 5517 ) (5) CBL 144.00 ( 27202 ) (0) CCBL 175.00 ( 22740 ) ( 1 ) CFCL 118.00 ( 1361 ) (0) CHCL 386.00 ( 3225 ) ( 1 ) CHL 84.00 ( 262 ) ( -2 ) CIT 2,541.00 ( 3561 ) ( 51 ) CLBSL 660.00 ( 392 ) (0) CMF1 10.07 ( 29600 ) ( 0.09 ) CORBL 115.00 ( 170 ) ( -2 ) CZBIL 198.00 ( 25669 ) (2) DDBL 821.00 ( 2808 ) ( -9 ) DHPL 54.00 ( 366 ) ( 1 ) EBL 710.00 ( 10493 ) ( -7 ) EDBL 308.00 ( 1133 ) ( -6 ) EIC 401.00 ( 11784 ) ( 11 ) FMDBL 510.00 ( 6391 ) ( -3 ) FOWAD 1,506.00 ( 401 ) ( -11 ) GBBL 227.00 ( 11846 ) (0) GBIME 246.00 ( 41422 ) ( -1 ) GBLBS 463.00 ( 6725 ) ( 1 ) GFCL 150.00 ( 470 ) (5) GGBSL 793.00 ( 100 ) ( -16 ) GHL 55.00 ( 700 ) ( -1 ) GILB 1,172.00 ( 2778 ) ( -18 ) GIMES1 8.43 ( 4300 ) ( -0.03 ) GLICL 440.00 ( 5097 ) ( 1 ) GMFBS 779.00 ( 171 ) ( -27 ) GMFIL 128.00 ( 136 ) ( 8 ) GRDBL 108.00 ( 1702 ) ( -8 ) GUFL 118.00 ( 1052 ) (0) HBL 532.00 ( 3775 ) ( -9 ) HDHPC 89.00 ( 500 ) ( -1 ) HDL 1,643.00 ( 7275 ) ( -1 ) HGI 396.00 ( 2830 ) ( -7 ) HIDCL 126.00 ( 12918 ) ( -2 ) HPPL 133.00 ( 2551 ) ( -8 ) HURJA 93.00 ( 440 ) ( -1 ) ICFC 183.00 ( 742 ) ( -4 ) IGI 432.00 ( 1682 ) ( 12 ) ILBS 700.00 ( 1127 ) ( -12 ) JBBL 170.00 ( 9238 ) ( -1 ) JFL 166.00 ( 3209 ) (2) JOSHI 59.00 ( 610 ) (3) JSLBB 1,385.00 ( 425 ) ( 18 ) KBL 191.00 ( 29742 ) ( -1 ) KKHC 51.00 ( 222 ) ( 1 ) KMCDB 751.00 ( 1901 ) ( -17 ) KPCL 106.00 ( 1170 ) (0) KRBL 105.00 ( 573 ) (3) KSBBL 148.00 ( 3722 ) ( -5 ) LBBL 186.00 ( 7910 ) ( 1 ) LBL 228.00 ( 18139 ) (2) LEMF 8.37 ( 15999 ) ( 0.01 ) LGIL 438.00 ( 1616 ) ( -1 ) LICN 1,400.00 ( 3569 ) (3) LLBS 1,100.00 ( 849 ) ( -16 ) MBL 226.00 ( 9312 ) ( -2 ) MDB 320.00 ( 795 ) (2) MEGA 217.00 ( 62437 ) (0) MERO 608.00 ( 2280 ) ( -7 ) MFIL 270.00 ( 17621 ) ( -2 ) MHNL 83.00 ( 700 ) ( -1 ) MLBBL 717.00 ( 976 ) ( 12 ) MLBL 192.00 ( 3300 ) (0) MMFDB 915.00 ( 969 ) (7) MNBBL 317.00 ( 5520 ) (0) MPFL 108.00 ( 768 ) (2) MSMBS 672.00 ( 442 ) (5) NABIL 805.00 ( 31326 ) ( -9 ) NADEP 600.00 ( 2285 ) ( -13 ) NBB 198.00 ( 14259 ) (2) NBF2 9.22 ( 10900 ) ( 0.07 ) NBL 256.00 ( 117103 ) (9) NCCB 189.00 ( 32890 ) ( -1 ) NCCBPO 116.00 ( 8536 ) (0) NEF 9.00 ( 127392 ) ( 0.18 ) NFS 204.00 ( 14046 ) (9) NGPL 115.00 ( 2757 ) (0) NHDL 128.00 ( 160 ) ( -2 ) NHPC 53.00 ( 14420 ) ( 1 ) NIB 438.00 ( 18411 ) ( -3 ) NIBD2082 1,010.00 ( 75 ) ( -2 ) NIBLPF 8.15 ( 103315 ) ( -0.01 ) NIBPO 372.00 ( 714 ) ( 1 ) NIBSF1 10.49 ( 173139 ) ( 0.49 ) NICA 547.00 ( 37152 ) ( -1 ) NICAD8283 1,035.00 ( 135 ) ( -20 ) NICBF 9.42 ( 3700 ) ( 0.22 ) NICGF 10.16 ( 70480 ) ( 0.18 ) NICL 426.00 ( 6995 ) ( -4 ) NICLBSL 746.00 ( 35625 ) ( -17 ) NIL 610.00 ( 9434 ) ( -8 ) NLBBL 691.00 ( 611 ) ( -24 ) NLG 620.00 ( 2928 ) ( 12 ) NLIC 1,330.00 ( 41935 ) ( 10 ) NLICL 655.00 ( 9272 ) ( -2 ) NMB 406.00 ( 55648 ) ( -3 ) NMB50 9.30 ( 5200 ) ( 0.1 ) NMBHF1 10.11 ( 11460 ) ( 0.38 ) NMBMF 705.00 ( 415 ) ( -5 ) NMFBS 1,594.00 ( 749 ) ( 28 ) NRIC 570.00 ( 118928 ) ( -5 ) NSEWA 702.00 ( 30 ) ( -17 ) NTC 652.00 ( 2521 ) ( 1 ) NUBL 955.00 ( 4444 ) ( -9 ) OHL 339.00 ( 445 ) ( -2 ) PCBL 259.00 ( 54975 ) ( -1 ) PFL 151.00 ( 531 ) (4) PIC 614.00 ( 6372 ) ( -1 ) PICL 448.00 ( 2046 ) ( 14 ) PLIC 529.00 ( 5980 ) ( -6 ) PMHPL 74.00 ( 800 ) ( -2 ) PPCL 115.00 ( 960 ) (2) PRIN 467.00 ( 7880 ) ( -8 ) PROFL 102.00 ( 20 ) (0) PRVU 230.00 ( 22738 ) ( -2 ) RADHI 168.00 ( 202 ) ( -3 ) RBCL 9,110.00 ( 51 ) ( -70 ) RHPC 84.00 ( 2494 ) ( 1 ) RHPL 146.00 ( 8390 ) (2) RLFL 124.00 ( 596 ) (0) RMDC 715.00 ( 4436 ) (0) RRHP 94.00 ( 510 ) ( 1 ) RSDC 467.00 ( 4839 ) ( -3 ) SABSL 708.00 ( 1263 ) ( -5 ) SADBL 144.00 ( 3098 ) (0) SAEF 9.60 ( 43300 ) ( 0.2 ) SAND2085 1,000.00 ( 125 ) (0) SANIMA 339.00 ( 10892 ) ( -4 ) SAPDBL 118.00 ( 3507 ) ( -3 ) SBI 425.00 ( 3338 ) (0) SBL 295.00 ( 16624 ) (2) SBLD2082 1,010.00 ( 25 ) ( -5 ) SCB 637.00 ( 6399 ) ( -6 ) SDESI 813.00 ( 2377 ) ( 13 ) SDLBSL 436.00 ( 60 ) ( 39 ) SEF 9.77 ( 97750 ) ( 0.3 ) SFCL 107.00 ( 5571 ) (3) SFMF 9.04 ( 700 ) ( -0.01 ) SHINE 230.00 ( 8805 ) ( -1 ) SHIVM 567.00 ( 12871 ) ( -3 ) SHL 155.00 ( 6591 ) ( -4 ) SHPC 218.00 ( 3671 ) ( 1 ) SIC 724.00 ( 680 ) ( 14 ) SICL 1,190.00 ( 10956 ) ( 10 ) SIL 582.00 ( 6147 ) ( 1 ) SINDU 125.00 ( 922 ) ( -2 ) SJCL 135.00 ( 8750 ) (0) SKBBL 1,220.00 ( 9877 ) (5) SLBBL 802.00 ( 4250 ) (2) SLBS 921.00 ( 692 ) ( -10 ) SLBSL 814.00 ( 280 ) (4) SLICL 425.00 ( 12361 ) ( -3 ) SMB 805.00 ( 90 ) ( -20 ) SMFBS 875.00 ( 160 ) ( -5 ) SPARS 818.00 ( 371 ) ( -32 ) SPDL 97.00 ( 1626 ) ( -1 ) SRBL 231.00 ( 12594 ) ( -2 ) STC 2,660.00 ( 90 ) (5) SWBBL 1,185.00 ( 1185 ) ( 8 ) TMDBL 161.00 ( 3177 ) ( -3 ) TRH 205.00 ( 3355 ) ( -7 ) UFL 175.00 ( 752 ) (0) UIC 360.00 ( 10877 ) (0) UMHL 102.00 ( 1154 ) ( -1 ) UNHPL 55.00 ( 20 ) ( -1 ) UPCL 70.00 ( 5310 ) (0) UPPER 223.00 ( 8446 ) ( -1 ) VLBS 907.00 ( 304 ) ( 17 ) WOMI 880.00 ( 1771 ) (0)
अढाइ दशकभन्दा लामो समयदेखि फोटोग्राफी क्षेत्रमा संलग्न दिनेशराज अर्याल फोटो कन्सर्नका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । नेपालको फोटोग्राफी क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने श्रेय पाएको फोटो कन्सर्नको साढे ६ दशक लामो इतिहास छ । युवा अवस्थामै फोटो कन्सर्नको सीईओ बनेका अर्यालले अध्ययनका हिसाबले विज्ञान विषय अध्ययन गरे पनि हाल डिजिटल टेक्नोलोजीमा विद्यावारिधि गर्दैछन् । व्यवस्थापन विषय पनि अध्ययन गरेका उनलाई प्रविधि पछ्याउँदै फोटो कन्सर्नको नाम चम्काउने श्रेय पनि जान्छ । फोटोग्राफीका विभिन्न उपकरण आयात र स्थानीय अधिकृत बिक्रेतासमेत रहेको यो कम्पनीले सयौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नहुँदा समस्या हुने गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अर्याल हाल यसको व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा लागेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै फोटोग्राफीको शैली फेरिए पनि फोटो कन्सर्नले सधैं यसको नेतृत्व गरिरहेको बताउने अर्याल डिजिटल प्रविधिमा पनि कन्सर्नले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । ‘डिजिटल प्रविधिको डिस्टिब्युटर्स लिएर मुलुकभर हाल कन्सर्नले नै मेसिन वितरण गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक सुविधा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल मानिसले फोटो खिचेर धुलाइ गर्ने भन्दा पनि मोबाइल फोटोको प्रयोग बढी गर्न थालेका छन् भने कतिपयले पोटे«ट खिच्न थालेका छन् । तर, कन्सर्नले यसलाई पनि व्यावसायिक स्वरूप दिएको छ । यस्ता फोटोलाई टिसर्ट, कपडा, मग र वाटर बोतलमा प्रिन्ट गर्न रुचाउने ग्राहकलाई समेत सेवा दिइरहेको फोटो कन्सर्नले यसलाई औद्योगिक रूप दिन प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि प्रवेश गरेको फोटो कन्सर्न के–कस्ता उद्योगमा लगानी गर्दैछ, रोजगारी सिर्जना र नेपालमा लगानी गर्न के–कस्ता चुनौती छन् भन्ने सवालमा सीईओ अर्यालसँग सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
कलरल्याबको क्षेत्रमा एउटा इतिहास बनाइसकेको फोटो कन्सर्नले अब नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्न लागेको हो ?
कलरल्याबको क्षेत्रका फोटो कन्सर्नलाई अब सर्वसाधारणमा थप चिनाउनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो फोटो स्टुडियोका रूपमा फोटो कन्सर्न स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा कोड्याकको आधिकारिक बिक्रेता फोटो कन्सर्न नै हो । फोटोग्राफीका क्षेत्रमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै सञ्जाल भएको कम्पनी मात्रै नभएर मानिसलाई फोटो संसारमा छुट्टै अनुभव दिने पनि हामी नै हौँ भन्ने लाग्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै नेगेटिभको विलय हुनु, पुरानो ढर्राबाट सञ्चालित कम्पनीहरू हराउनु र नयाँ कम्पनी माथि जाने नौलो कुरा होइन । यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि नदेखिएको होइन, उदाहरण प्रशस्तै छन् । कतिपय कलरल्याबले समयअनुसार आफूलाई अपडेट गरे, तिनीहरू बजारमा रहन सके भने जसले आफूलाई अपग्रेड गर्न सकेनन् तिनीहरू हराएर पनि गए । फोटोग्राफीकै क्षेत्रमा काम गरेका ठूला–ठूला कम्पनीहरू पनि बन्द भएका उदाहरण छन् । अर्कातर्फ डिजिटल मेसिन ल्याउने पनि फोटो कन्सर्न नै हो भने डिजिटल मेसिन सबैभन्दा धेरै बेच्ने पनि हो । त्यसका बाबजुद फोटोसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्न लागेका छौँ । फोटो कन्सर्न हिजोको दिनमा भन्दा परिष्कृत भएर आएको छ भने समयको मागअनुसार थप परिष्कृत हुनु पनि पर्छ । यसका साथसाथै अबको हाम्रो गन्तव्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोडिएको छ ।
के–कस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुँदैछन्, फोटोसँग नै सम्बन्धित हुन् या अन्य ?
हामीले तत्काल ल्याउन लागेका चार उद्योग हुन्, जसमध्ये फोटो फ्रेम, टुथपिक, बन्टिङ पाइप र फ्याब्रिक झोला हो । यीमध्ये फोटो फ्रेम र बन्टिङ फोटोसँगै सम्बन्धित हुन् भने अन्य दुई सम्बन्धित छैनन्, तर यिनले अर्थतन्त्रमा दिने योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ । निर्यात गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, आन्तरिक बजारलाई चाहिने सामान उत्पादन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हामीले उत्पादन गरेका समानहरू आन्तरिक बजारका लागि निकै महत्वपूर्ण छन्, भविष्यमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फोटो कन्सर्नले पाइला चाल्ने प्रयास गरेको छ, सफलतासँगै नयाँ उद्योगहरू थप गर्दैै जान्छौँ ।
फोटो व्यवसाय गरिरहेको एक घराना कसरी उद्योगतर्फ जान मन लाग्यो ?
प्रविधिको विकाससँगै नयाँ–नयाँ संस्करणको विकास भएको छ । हामीले पनि नयाँपन गर्र्नु जरुरी देखियो, चाहे त्यो फोटोसँग सम्बन्धित होस् या अन्य । देशमा आवश्यक रहेको तर कसैले नगरेको काम अध्ययन गर्दै जाँदा यस्ता उद्योगहरूमा हामीले हात हालेको हो । मुख्यतः केही समयअगाडि चीनको एक मेला अवलोकन गर्न जाँदा त्यहाँबाट प्रेरित भएर मैले पनि नेपालमा अध्ययन गरेँ र सम्भावना देखेर नै लगानी गरेको हो ।
उद्योग सञ्चालन भइसके वा सञ्चालनको तयारीमा छन् ?
फोटोसँग सम्बन्धित नै रहेर उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र फोटो फ्रेम उद्योग सुरु गरेका छौँ । चीनबाट मेसिन ल्याएका छौँ भने सुरुका दिनमा चीनबाटै प्राविधिक पनि ल्याएर दैनिक सय डलर तिर्न बाध्य भयौँ । नेपालमा यस्ता खालका प्राविधिक पाउन मुस्किल छ । यस विषयमा आइडिया भएका व्यक्ति नै छैनन् । हामीसँग प्रविधि थिएन भने चीनसँग भाषाको समस्या हुने थियो । चीनका प्राविधिकलाई तीन महिनासम्म राखियो, उनीहरू गएपछि उद्योग बन्द भयो । फेरि हामी भारत गएर अर्काे टिम ल्याएर दुईवटा प्रडक्सन लाइनले २४ घण्टा प्रडक्सन गर्दा पनि मागअनुसार पूर्ति गर्न सकेका छैनौँ । यही उद्योगमा जति बजारको साइज थियो त्यो देखेर अहिले नेपालमै रिसाइकल प्लान्ट पनि सुरु गरेका छौँ । तेस्रो प्लान्ट ल्याउनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । पहिले शतप्रतिशत आयात हुने सामान अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्वदेशी उत्पादनको खपत भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना गरेर होस् या कर तिरेर या अन्य अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा हामीले टेवा पु-याइरहेका छौँ ।
अर्काे फोटो व्यवसायमा प्रिन्टिङपछि ह्याङ्गिङ गर्ने गरिन्छ, त्यसका लागि प्रयोग हुने पाइप वन्टिङ पाइप हो । त्यो पाइप शतप्रतिशत चीनबाट आयात हुन्थ्यो । त्यसलाई केही गरेर उत्पादन गर्न सकिए वार्षिक २० देखि २५ करोडसम्म भए पनि देशको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसको अध्ययन ग-यौँ । १-२ पटक यसैसँग सम्बन्धित चीनको मेला अवलोकनपछि थप आइडिया आएको हो । यसको उद्योग फर्पिङ दक्षिणकालीमा सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी टुथपिक उत्पादन गर्नका लागि मेसिन आएको छ । देख्दा सानो भए पनि कसैले नसोचेको मध्ये टुथपिक उद्योग पर्छ । र, अर्काे बजारमा प्लास्टिक मुक्त गर्ने भन्ने सरकारको योजना छ, वातावरणमैत्री नन–ओभन ब्याग ल्याउन लागेका छौँ । यसको उत्पादन फरक तरिकाले गर्न लागिएको छ । यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चारवटा उद्योग एकैसाथ आएका छन् । ट्रेडिङ व्यवसाय भने पुरानै हो, निरन्तर चलिरहेको छ ।
फोटो फ्रेमको अहिलेको बजार माग कति हो ? तपाईंहरूको उत्पादनले कति प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ?
फोटो फ्रेम दुई तरिकाले आउने गरेको छ, एउटा तयारी सामान र दोस्रो कच्चा पदार्थ ल्याएर आफ्नो साइजअनुसारको बनाउन मिल्छ । नेपालमा वार्षिक ३५ देखि ४० करोडको बजार छ । अधिकांश अहिले पनि रेडिमेड फोटो फ्रेम आउँछ जसले थोरै नाफा दिन्छ र छिटो बेच्न सकिन्छ । अर्कातर्फ कच्चा पदार्थ ल्याएर आफ्नो साइजअनुसार फोटो फ्रेम बनाउन सकिन्छ । हामी यस्तो परम्परागत सोचाइ भंग गर्दै नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर उद्योग राखेको हो । सुरुका दिनमा निकै कष्टपूर्ण अवस्था रह्यो । धेरै संघर्ष गर्दै चार वर्ष पूरा भएको छ, जुन चार वर्ष घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन भयो । अहिले भने हामी नाफामा जान थालेका छौँ । चार वर्षको दौरानमा नेपाली फ्रेम भनेपछि नकिन्ने प्रचलन तोड्दै नेपाली हो कि होइन भनेर चिनेर किन्ने बानी बसाल्न सफल भयौँ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट दुईवटा प्लान्ट महिनाको २६ देखि २८ दिनसम्म चल्छ । त्यसले देशको कुल मागको ७० प्रतिशतसम्म पूरा गरेको छ । अहिले ३५ हजार किलो प्रतिमहिना कच्चा पदार्थको माग हुन्छ, हामी अहिले २५ हजार किलोको सप्लाई गर्न सक्षम भएका छौँ । फाइनल गुड वर्षको ३० देखि ३५ करोडको कारोबार हुन्छ । अहिले रेमिमेड फ्रेमहरू आइरहेको अवस्था पनि छ । हामीले फ्रेममा निर्भर रहेर उद्योग चलाउने ४ सयजना जनशक्ति उत्पादन गरिसकेका छौँ । विकट मानिने रुकुमपूर्वमा पनि फ्रेमको उद्योग सुरु गरिसकेका छौँ । १ सय २५ भन्दा धेरै फ्रेम उद्योगी बनाइसकेका छौँ । यिनीहरूले फ्रेम बनाएर बेचिरहेका छौँ ।
तपाईंहरूले उद्योग चलाउने हो कि उद्योगी उत्पादन गर्ने ?
हामी कच्चा पदार्थ सप्लाइ गर्छाैं । यो कच्चा पदार्थबाट सामान्य रूपमा ४-५ लाखको पुँजीमा उद्योग खोेलेर व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन्, त्यस्ता व्यवसायीहरू अहिले २० देखि २५ लाखको पुँजी बनाएर काम गर्न सक्ने भएका छन् । बजारमा १ सय २५ जना नयाँ उद्योगी हामीले थपेका छौँ ।
फोेटो फ्रेममा नयाँ प्रविधिको चुनौती कत्तिको छ ?
यस क्षेत्रमा नयाँपन अवश्य चाहिन्छ । हामीले एकपटक एउटा डिजाइनको फ्रेम बनाएर दिएपछि सोही ग्राहकलाई अर्को डिजाइन मन पर्ने रहेछ । पहिले हामीसँग ६० वटा डिजाइन थियो भने अहिले थप ६० वटा डिजाइन थप गरेर १ सय २० वटा डिजाइन राखेका छौँ । हरेक महिनामा फ्रेमका भेराइटिजहरू थप गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने ग्राहकको इच्छाअनुसार फ्रेमको भेराइटी परिवर्तन हुन्छ । नयाँ फोटोमा फ्रेम गर्दा नयाँपन खोज्ने भएकाले मासिक तीन–चारवटा नयाँ भेराइटी थप गरेका हुन्छौँ ।
कसरी उद्योगी बनाउनुहुन्छ ? सार्वजनिक सूचना दिने हो या आफ्नो सर्कल प्रयोग गर्ने ?
नेटवर्कका लागि हामीलाई समस्या छैन । बलियो नेटवर्क भएकाले ग्राहकलाई इन्करेज गर्दै फोटो स्टुडियो मात्रै चलाएर बस्नेलाई नयाँ अफर लिएर जान्छौँ । लागतदेखि सम्पूर्ण विवरणको जानकारी दिएपछि उत्सुक हुनेलाई हामीले उद्योगमा ल्याएर तालिम प्रदान गर्छौं । तालिम गरेपछि कच्चा पदार्थ, मेसिन हामी दिन्छौँ र सामान बनाएर स्थानीय बजारमा उनीहरूले बेच्दै आएका छन् । उनीहरूलाई दिने तालिम पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन्छ ।
अर्काे उद्योग बन्टिङ पाइपको कत्तिको सम्भावना छ ?
मैले चीनको एउटा मेलामा जाँदा प्लास्टिकसम्बन्धी एउटा विभागमा हेर्दा यो मेसिनका बारेमा जान्ने अवसर पाएँ, नेपाल आएर गृहकार्य गरेँ । अहिले यसको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । फर्पिङमा उद्योग छ भने वार्षिक १५ करोडको बजार नेपाली बजार भएकाले सम्भावना राम्रो छ । मध्यम खालको व्यापारका लागि यो राम्रो क्षेत्र हो । अहिले यस उद्योगमा सात जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् । देशकै बिजुली खर्च गरेर गाउँकै युवालाई रोजगारी दिएका छौँ । यसको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो ।
नेपाली बाँसको उच्चतम प्रयोग गरिने टुथपिक कहिलेदेखि बजारमा आउँछ ?
सुन्दा यो निकै सानो कुरा हो, तर यसको खपत पछिल्लो समय घर, रेस्टुराँ, होटलहरूमा अत्यधिक बढेको छ । यसमा पनि कसैको ध्यान गएको पाइएन । सुरुमा अनौठो लागेर नै काम सुरु गरेको छ । अहिले मेसिन आइसकेको छ । नेपालमा बाँस धेरै छ, सहज रूपमा पाउन पनि सकिन्छ । कतिपय बाँस यत्तिकै खेर गएका छन्, तर हामीले टुथपिक भारत र चीनबाट आयात गरिरहेका छौँ । यसले देशमा केही व्यक्तिलाई रोजगारी, आफ्नै देशको बिजुली खपत र व्यापारघाटामा केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर उद्योग स्थापना गरेका हौँ । मासिक कम्तीमा डेढ करोडसम्मको व्यापार हुन्छ भन्ने अनुमान छ । घरेलु उद्योग भए पनि यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । शनिबारदेखि उद्योगले परीक्षणका रूपमा उत्पादन गर्दैछ । यसले दिनमा २ देखि ३ लाख पिस निकाल्न सक्छ । नेपाली बजारको माग धान्न सकिन्छ ।
विज्ञापनको नयाँ तरिका फ्याब्रिक झोला उद्योग सञ्चालनमा आएको हो ?
भारत तथा चीनमा प्लास्टिकका झोला हटाइएको छ भने नेपालमा पनि हटाउने क्रम जारी छ । विभिन्न नगरपालिककाले सूचना जारी गरिसकेका छन् । अहिले ह्वाइट प्लास्टिकलाई रिप्लेस गरेर नन–ओभन फ्याब्रिक झोला बजारमा पाउन सकिन्छ । नेपालमा २४ वटा यस्ता झोला बनाउने उद्योग छन् । सबै उद्योग जेनतेन चलेका हुन्, उल्लेख्य नाफामा जान सकेको अवस्था छैन । किन नाफामा जान सकेनन् त भनेर बुझ्दा पार्ट टाइममा रूपमा उद्योग चलेको देखियो । चुनौतीका बाबजुद मैले यही उद्योग चलाउने सोच बनाएर मेसिन खरिद गरेँ । अहिले उद्योग चितवनमा छ । केही समयमा उत्पादन बजारमा आउँछ । एउटा टिभीसी बनाउँदा लाख रुपैयाँभन्दा धेरै जान्छ, त्यही विज्ञापन झोलामा बनाउने र ग्राहकसम्म पु-याउने हो भने लागत कम पर्छ । हामी शतप्रतिशत प्रिन्टेड झोला दिन्छौँ र नगन्य रूपमा प्रिन्टिङ खर्च लिन्छौँ । प्रिन्टिङ सुविधा अहिले काठमाडौँका कोर ठाउँमा छैन । हामीले फोटो कन्सर्नको मातहतमा न्युरोडमै यो उद्योग राखेका छौँ । ग्राहक आफैं आएर छनोट गर्न सक्छन् । यसबाट विज्ञापन व्यवसाय नयाँ तरिकाले अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास छ ।
अरू उद्योगीहरू उत्पादनबाट ट्रेडिङमा गएका छन्, तपाईंहरू ट्रेडिङबाट विस्तारै उत्पादनतिर जान खोज्दै हुुनुहुन्छ, किन ?
धेरैजसो व्यवसायीले उद्योग चलाउन कठिन मान्दै सजिलो व्यापार ट्रेडिङतिर लागेको यथार्थ हो । ट्रेडिङ सजिलो व्यवसाय हो, यसमा च्यालेन्जिङ भन्ने भएन । अरूले नगरेको काम गर्दा चुनौती पनि धेरै हुन्छ र त्यसमा रिटर्न पनि हुन्छ भन्ने हो । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाभ धेरै छ भने सामाजिक स्टेटस पनि राम्रो बनाउँछ । राष्ट्रले पनि आयातलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । हामी जस्ता अरू युवाले पनि देशमै सानो ठूलो उद्योग खोले भने त्यसको लाभ देशलाई हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमै किन जाने, आफ्नो देशमा केही गर्न सके देश र उद्योगी दुवैलाई लाभ हुन्छ । यसका साथै सोलार ब्याट्री र रबरब्यान्डको उत्पादन गर्नेतर्फ पनि काम अगाडि बढेको छ । सानै पुँजीको मात्रै किन नहोस्, उद्योग गर्नुस्, त्यसले तपाईंलाई विदेश जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा बढी लाभ छ त भन्नुभयो, कच्चा पदार्थ कत्तिको सहज छ नि ?
टुथपिक शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । फोटो फ्रेमको कच्चा पदार्थ भारत र चीनबाट आयात गर्छौं । फ्याब्रिक झोलाको कच्चा पदार्थ पनि प्लास्टिक हो यसको नेपालमा केही उद्योगले यसको उत्पादन गर्छन्, हामी त्यो किन्छौँ । यसका लागि इन्डियन आयल कर्पाेरेसनसँग किन्नुपर्छ । जुन भारतले आफ्नो माग पूरा भएपछि मात्रै नेपाललाई बिक्री गर्ने हो । ब्याट्रीका लागि पनि लिड आयात नै गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपालमा पनि केही पहल होला, तर अहिले भने कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपरेको छ ।
तपाईंहरू कच्चा पदार्थ उत्पादनतिर जाने सोचमा हुनुहुन्न ?
नेपालमा भएको ब्याट्रीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ कवाडीको भाउमा भारत पठाउँछौं, फेरि फाइनल गुडका रूपमा किन्छौँ । यसको कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतको भ्यालु थपिन्छ । यही कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन गर्न सकेमा धेरै लाभ हुन्छ । सरकारले अहिले विद्युतीय गाडीको अवधारणा ल्याएको छ, त्यसको सबैभन्दा मुख्य पार्ट ब्याट्री हो । एउटा गाडीमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको ब्याट्रीको कुरा आइरहेको छ । त्यसैले हामीले लिड रिसाइकल प्लान्ट र मिथेन आयल प्लान्ट नेपालमा उत्पादन गर्न सकेमा विद्युतीय गाडीको कस्ट धेरै घट्न सक्छ ।
र अन्त्यमा, यी सबै उद्योगमा कति लगानी हुँदैछ ?
हेटांैडामा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भएकाले त्यो लिजमा हो । मेसिन र प्लान्ट तथा अन्य बजारीकरणका लागि खर्च गर्ने हो, यसमा १० करोड बराबरको लागत छ । त्यसैगरी टुथपिक १ करोड, फ्याब्रिक झोलामा ५ करोडबाट सुरु हुन्छ । अहिले २० देखि २५ करोडको लागत छ । आवश्यकताअनुसार लगानी थप्दै जाने हो ।